Taageerayaasha Twitch Free | Iibso Twitch Followers | Streamular
Taageerayaasha Twitch Free | Iibso Twitch Followers
Ku kori kanaalkaaga Twitch ka dhaqso badan waligii hore adiga oo raacaya Twitch-ka bilaashka ah!
Isticmaal adeegeena si aad u hesho taageerayaasha Twitch ee bilaashka ah kuwaas oo dhab ah oo lala beegsaday nichekaaga, ama si fudud u soo iibso taageerayaasha Twitch si aad u hesho koritaan degdeg ah.
Hel Taageerayaasha Twitch Bilaash ah or Soo iibso Laba Tartiibayaal
Hadaadan dhib ka qabin inaad daqiiqado yar qaadato maalin kasta si aad udhaqaajiso qorshe, waxaan bixinaa ikhtiyaarro aad u fiican oo keena ilaa 10 taageerayaal bilaash ah & 20 jecel free Twitch maalintii.
Streamers sidaada oo kale waxay adeegsaneysaa adeegan sarrifka ah si ay uga kasbadaan macaamiisha gadaal iyo gadaalba inta udhaxeysa Streamers kale.
Adeegga Streamular`s waa mid aamin ah oo aamin ah! Kanaallada Twitch laguma ciqaabo adeegsiga adeeggayaga waxaanna ku shaqeynaa sirta, amniga iyo sirta adag.
Haddii aad doorbideyso inaad dadaal la'aan oo aad si toos ah u kasbato kuwa raacsan Twitch oo aad jeceshahay maalin kasta, markaa waxaan kugula talineynaa qorshe lacag bixin ah si aad u hesho dadaal-la'aan, koritaan maalinle ah!
Waxaan rabaa kuwa raacsan ee Twitch bilaash ah hada!
Raac talaabooyinkan fudud isla markaana kobci kobaca kanaalkaaga Twitch daqiiqado gudahood!
Saxeex & Galid
Kusoo Koraya Kuwa Raaca Twitch Bilaash
Twitch waa mid ka mid ah baraha bulshada ee ugu koritaanka badan. Iyadoo in ka badan laba milyan oo raacsan ay socdaan bil kasta, Twitch ayaa caan ku ah kaliya dhalinyarada laakiin jiilasha waawayn sidoo kale. Laga soo bilaabo madadaalada fiidiyowga ilaa ciyaaraha internetka, isticmaalayaashu waxay ka heli karaan uun nooc kasta oo ka mid ah waxyaabaha ay raadinayaan.
Barxadda ugu weyn ee socodka tooska ah
Ma ogtahay in Twitch uu yahay barmaamijka aduunka ugu balaaran ee fiidiyaha lagu faafiyo? Ka dib markii la bilaabay bilowgeeda, waxay heshay 8 milyan oo soo booqde ah. Maanta, Twitch wuxuu xisaabiyaa ku dhowaad 43% dhammaan dakhliga ka soo gala waxyaabaha fiidiyoowga ah ee fiidiyowga ah. Asal ahaan waa halka durdurrada tooska ah looga sii daayo waxyaabaha ay ka kooban yihiin kuwa raacsan. Kaliya kuma xadidna ciyaaraha khadka tooska ah – qayb “Hal-abuurnimo” ayaa loo heli karaa farshaxan-yahannada si ay ugu soo bandhigaan shaqadooda dadka isticmaala.
Madadaalo madadaalo, Twitch sidoo kale waxay noqotay beel firfircoon halkaas oo kuwa leh danaha iyo hiwaayadaha la wadaago ay ka heli karaan meel ay ka wadaagaan. Isdhexgalka qolka sheekaysiga iyo faallooyinka tooska ah ayaa ka dhigaya khibrada 'Twitch' mid isku xidhan oo xamaasad badan. Ku xirida taageerayaasha leh qulquliyeyaasha, Twitch waxay siisaa barxad xasiloon oo loogu talagalay dadka isticmaala si ay u daawadaan waxyaabaha xiisaha leh ee la heli karo oo ah qaab baahiyo dhaadheer oo toos ah.
Maxay tahay inaan u yeesho kuwa raacsan barta 'Twitch'?
Kaliya maahan in la daawado waxyaabaha, laakiin Twitch wuxuu u noqday il dakhli muhiim u ah qulquliyeyaal badan. Kuwa soo qulqulaya badanaa way ogyihiin in daawadayaasha badankood soo noqon doonaan oo ay noqon doonaan kuwa raacsan. Tiro aad u tiro badan oo raacsan ayaa kaa caawin kara hagaajinta sumcaddaada sidii durduriyaha.
Haddii aad si dhakhso leh ugu baahan tahay taageerayaasha oo aad rabto inaad ku bixiso dadaalka ugu yar, waxaad iibsan kartaa taageerayaasha Twitch si aad u hesho dhaqdhaqaaqa koritaankaaga.
Sanadihii la soo dhaafay, Twitch wuxuu ka caawiyay wabiyayaashu inay helaan dakhli aad u tiro badan. Streamers on Twitch waxay ku kasban karaan lacag siyaabo kala duwan, sida dakhliga ka soo gala xayeysiinta, tabarucaada, diiwaangelinta, baayacmushtarka, iyo xiriiriyeyaasha xiriirka la leh. Isticmaalayaasha isticmaala Twitch waxay ka sameeyeen qulqulka xulasho xirfadeed, iyadoo qaar ka mid ah dadka isticmaala ay kasbadaan ugu badnaan $ 350,000 bil kasta. Tani waxay ka dhigan tahay haddii aad xiiseyneyso inaad ka dhigto Twitch goobtaada shaqada, waxaa jira habab badan oo hal abuur leh oo aad ugu isticmaali karto ilaha dakhliga.
Haddii aad rabto inaad bilowdo inaad kasbato koontadaada 'Twitch', waxaad u baahan tahay inaad yeelato xiriiriye 'Twitch affiliate', taas oo suurtagal ah keliya marka aad ugu yaraan 50 taageerayaal ku leedahay kanaalkaaga Twitch. Tiro badan oo taageerayaal ah ayaa kaa caawineysa hagaajinta sumcaddaada inaad tahay durdur oo kuu fududeyso inaad abuurto dakhli badan oo aad caan ku noqoto Twitch.
Marka laga soo tago dakhliga, waxaa jira sababo aad u tiro badan oo ah sababta aad uga fiirsan laheyd kordhinta saamiga kuwa raacsan Twitch ee aad hadda haysato. Aynu eegno qaar ka mid ah kuwan hoos ku qoran:
1. Ogaanshaha sumadda
Helitaanka aqoonsiga sumcadda ayaa ka mid ah ujeeddooyinka ugu muhiimsan ee suuq-geynta. Haddii aad rabto inaad ku kobciso ganacsi khadka tooska ah, waa inaad hubaal ka dhigtaa mudnaanta. Tani waa sababta oo ah macaamiisha ayaa doonaya inay ku bixiyaan kheyraadkooda noocyada ay aqoonsadaan.
Warbaahinta bulshada waa aalad weyn oo awood u siinaysa dhisme summad wax ku ool ah oo dhakhso leh. Waxay kaa caawineysaa inaad calaamaddaada hor dhigto dadka kale halkii si dhakhso leh oo fudud. Waxay u oggolaaneysaa dhagaystayaasha inay inta badan arkaan astaantaada, iyo xitaa marka dadku aysan ka fekerayn wax soo saarkaaga.
Dhismaha noocyadu si weyn ayuu ugu tiirsan yahay muuqaalka, markaa qaado waqti aad ku maal gashato joogitaankaaga internetka. Soo rar waxyaabo muuqaal soo jiidasho leh sida dabool wanaagsan iyo sawirro muuqaal ah. Macluumaadka ku saabsan naftaada ka dhig mid si fudud loo heli karo, oo ay ku jiraan cidda aad tahay, waxaad qabanayso, kanaalladaaga warbaahinta bulshada, iyo sida lagula soo xiriiri karo.
2. Xiriirinta sababaha
Mid ka mid ah hababka ugu dhaqsaha badan ee lagu abuuri karo wacyiga arrin kasta waa iyada oo la soo dhigo baraha bulshada. Mawduuc ayaa loo gudbin karaa dhowr jeer, taas oo ka caawisa sidii ay dad badani u arki lahaayeen. Haddii aad isku dayeyso inaad soo ururiso dareenka dadweynaha ee ku aaddan sababo gaar ah, duubistiisa iyo ku dhiirrigelinta barta 'Twitch' ayaa kaa caawin kara inaad ku guuleysato ujeeddadan.
Waxyaabaha wanaagsan ayaa si fudud u soo jiidan kara daawashada weyn oo kaa dhigaya mid caan ah. Isticmaalidda hashtags sax ah ayaa kaa caawin kara inaad dadka ka toosiso astaamahooda warbaahinta bulshada illaa boggaaga astaanta iyo ugu dambeyntii boggaaga haddii aad mid leedahay. Tani waxay ku siinaysaa soo celin aad u fiican maalgashiga.
3. Kordhinta taraafikada
Lahaanshaha joogitaanka warbaahinta bulshada oo xoog leh waxay awood kuu siineysaa inaad kordhiso taraafikada waxyaabaha aad ka kooban tahay. Maaddaama baraha bulshada ay gacan ka geystaan ​​kor u kaca taraafikada kanaalkaaga, taraafikada aad ka hesho makiinadaha raadinta ayaa sidoo kale kordha. Si looga caawiyo hawshan, waxaa muhiim ah inaad ka fikirto waxa aad soo dhigayso iyo inta jeer ee aad wadaagto waxyaabaha. Ka fiirsashada waxyaabahan waxay kuu oggolaaneysaa inaad bartilmaameedsato macaamilka saxda ah iyo inaad kor u qaaddo dadaalkaaga suuqgeynta internetka.
4. Fursadaha koraya
Horumarinta bulsho xoog leh oo raacsan khadka tooska ah waxay ka dhigan tahay inaad noqon kartid saamile. Tani waxay kuu turjumi kartaa inaad hesho fursado badan oo kaa caawinaya sii socoshada ganacsigaaga internetka. Dhiirrigelinta lacag-bixinta ah, iskaashiga, iyo wada-calaamadeynta ayaa albaabada u furi kara fursado badan oo aad ku gaarsiin karto meheraddaada heerka xiga.
Tusaale ahaan, haddii aad si guul leh ugu dhistay saldhig adag oo raacsan barta 'Twitch' waxyaabaha aad ka kooban tahay ciyaaraha, kuwa kale ee isku dayaya inay la mid noqdaan kooda waxay ku weydiin karaan inaad kaligaa ama faallo wadaag la wadaagto. Guusha iskaashigan ayaa u turjumi kara labadaba dakhli badan iyo kuwa raacsan labadiinaba.
5. Aqoonta danaha dhagaystayaasha iyo dookha ay leeyihiin
Maaddaama saldhiggaaga raaca uu korayo, waxaad wax badan ka baran doontaa niche-gaaga. Ku celceli dhagaysiga bulshada, taas oo ah ficilka ah fiirsashada sheekooyinka ku saabsan mawduucyada ku xidhan kanaalkaaga. Tani waxay kaa caawin doontaa inaad fahamto waxa dhagaystayaashaadu qiimeeyaan. La macaamilkooda qolka lagu sheekeysto ayaa sidoo kale kaa caawin doonta inaad aqoonsatid waxa dhagaystayaashaadu ay la dhibtoonayaan iyo farsamada farsamada ee sida ugu fiican uga codsanaya iyaga.
Si aad si fiican ula xiriirto dhagaystayaashaada, waxaa waxtar leh in la daawado codka iyo luqadda dadku u adeegsadaan inay ku wada xiriiraan. Waxaa laga yaabaa inay ku kala duwanaadaan nooca isgaarsiinta ee ka dhex dhacda dhalinyarada iyo jiilasha waaweyn. Ka fikir cidda ay tahay inaad inta badan jeceshahay inaad beegsato oo aad wax ka qabato si waafaqsan.
6. Xidhiidh badan
Caannimada sii kordheysa, waxaad la kulmi doontaa isticmaaleyaal kale oo laga yaabo inay xiriir fiican leeyihiin. Marka lagu daro inaad leedahay taageere daacad ah, waxaad sidoo kale horumarin kartaa xiriiro lala yeesho waxyaabaha isku filka ah, wariyeyaasha, cilmi baarayaasha, iwm. Xiriir kasta wuxuu kuu hayaa fursad aad ku kobciso kanaalkaaga intaad dadka kale ka caawinayso jidka.
7. Iibin badan
Markaad hesho tiro aad u tiro badan oo raacayaal ah, waxyaabaha aad ka kooban tahay waxay u muuqan doonaan rafcaan badan, waxaadna heli doontaa iibsiyo badan. Waxay sidoo kale ku siinaysaa gees tartan ah kuwa kale ee bixiya nooc alaab ah. Tusaale ahaan, haddii aad ku shaqeysid barnaamij majaajilo ah 'Twitch' oo aad leedahay 100,000 oo raacsan, halka tartame bixiya nooc madadaalo ah uu leeyahay oo keliya 100 taageerayaal ah, fursadaha ayaa ah in kuwa raacaya ay suurtogal tahay inay ku xirnaadaan kanaalkaaga halkii ay iyagu ka heli lahaayeen. Haysashada dad badan oo soo raaca waxay ka dhigeysaa kanaalkaaga mid bulsho ahaan waxtar leh maaddaama ay kor u qaadayso kalsoonidaada inaad tahay bixiye waxyaabo wanaagsan oo madadaalo leh.
8. Caannimada maaddada
Dhageystayaal badan ayaa kaa caawin kara inaad si ballaaran ugu faafiso waxyaabahaaga. Abuuritaanka iyo wadaagida waxyaabaha wanaagsan maalin kasta waxay kaa caawineysaa inaad ku faafiso waxyaabahaaga shabakadahaaga iyo shabakadaha kuwa raacsan. Haddii dadaaladaada suuqgeynta ay guuleystaan, dhagaystayaashaadu waxay la wadaagi karaan cayaarahaaga boqollaal ama kumanaan jeer maalin kasta. Qiyaas nooca saameynta ay ku yeelan laheyd astaantaada iyo adiga sida durduriyaha / abuureha.
9. Heerarka kalsoonida oo la hagaajiyay
Dhamaadka maalinta, waxaad dareemi doontaa inaad ku qanacsan tahay doorka aad ka qaadatay mideynta koox dad ah oo leh dano guud iyo damacyo. Ahaanshaha qabanqaabiyaha kooxdan ayaa awood kuu siinaysa inaad ku faraxdo guulaha aad gaadhay. Guushaadu waxay gacan ka geysan doontaa hagaajinta kalsoonida iyo iimaanka aad naftaada ku qabtid adiga oo ku siinaya khibrad aad ku sii waddo ka sifeynta shaqadaada.
Sideen ugu kori karaa dadka raacsan kanaalkayga 'Twitch'?
Kordhinta tirada dadka raacsan ee aad ku leedahay Twitch waxaa lagu gaari karaa habab kala duwan. Haddii aad rabto inaad ku sameyso adoo bixinaya khidmad, taasi waa wax weyn. Laakiin haddii aad rabto inaad ku kasbato kuwa raacsan bilaash, taasi way ka sii fiican tahay!
Waa kuwan runta ku saabsan adeegsiga Twitch ahaan sida koronto-dhaliye: waxay kaa caawin kartaa si ballaadhan haddii aad si joogto ah ugu kordhayso tirada raacsan kanaalkaaga. Markii hore, waxay qaadan kartaa xoogaa xoogaa ah kahor intaadan bilaabin inaad aragto kuwa raacsan. Iyada oo xoogaa taxaddar iyo qorshayn istiraatiiji ah, waxaad ku socon doontaa jidkaaga si aad uga dhigto xirfad guuleysata koontadaada socodka.
Haddii aad raadineyso inaad ku kasbato kuwa raacsan Twitch bilaash, waxaa jira siyaabo badan oo aad taas ku gaari karto. Taa bedelkeeda, haddii aad rabto inaad xoogaa lacag ah ku bixiso miisaaniyaddaada suuqgeynta warbaahinta bulshada, waxaa jira fursado badan oo taas la mid ah sidoo kale. Si kastaba ha noqotee, had iyo jeer waa lagugula talinayaa inaad daaliso doorashooyinkaaga bilaashka ah ka hor intaadan u jeesan kuwa lacagta la siinayo.
Faa'iidooyinka sii kordhaya kuwa raacsan Twitch si bilaash ah
Haddii aad hadda ka bilaabeysid kanaalkaaga 'Twitch channel', adeegso habab bilaash ah si aad marka hore u kobciso kuwa raacsan. Waxay kuu ogolaaneysaa inaad ku tijaabiso fikradahaaga qaab miisaaniyad-saaxiibtinimo leh. Waxay sidoo kale kaa caawineysaa inaad fahamto sida ugu wanaagsan ee aad u kobcin karto kanaalkaaga iyadoo la siinayo istiraatiijiyado kala duwan oo bilaash ah iyo kuwo lacag bixin ah oo jira.
Taas, aan aragno siyaabo aad ugu kobcin karto kuwa raacsan Twitch bilaash ah.
1. U adeegso Streamular.com Kuwa Bilaashka ah ee 'Twitch Followers'
Waxaad ku aqrinaysaa maqaalkan Streamular.com, oo ah hogaamiyaha ugu sarreeya ee taageerayaasha Twitch-ka ee bilaashka ah, sidaa darteed macno unbaa samaynaysa inaan xusno adeegeena. In kasta oo eexasho, waxaan u diyaarinay barxadeena inay noqoto mid aad u saaxiibtinimo leh oo aad ufudud u ah qofkasta oo doonaya inuu ku helo kuwa raacsan Twitch si bilaash ah. Adoo si fudud u raacaya isticmaaleyaasha kale ee 'Twitch' ee danaha la midka ah, ku soo noqoshada, shabakaddeenna ayaa leh isticmaaleyaal kale oo 'Twitch' ah oo dano la mid ah kuula socda.
Waad kicin kartaa qorshaha bilaashka ah maalin kasta oo waad soo laaban kartaa maalinba maalinta ka dambeysa si aad mar labaad u dhaqaajiso. Sidaa darteed, kuu oggolaanaya inaad si aan dhammaad lahayn u koraan koontadaada 'Twitch' bilaash ah.
Haddii aadan xiiseyneynin inaad qabato shaqada booqashada Streamular.com oo aad raacdo astaamaha kale mar kasta oo aad rabto inaad raacdo barta 'Twitch' ka badan, markaa waxaad dooran kartaa qorshe lacag bixin ah, oo kaa doonaya inaad raacdo dadka 0 oo si toos ah u ordo, adoo u diraya kuwa raacsan muuji maalin kasta iyada oo aan loo baahnayn in farta la qaado ama dib loogu soo laabto websaydhka.
Kumanaan ka mid ah isticmaaleyaasha 'Twitch' waxay bilaabaan inay kasbadaan kuwa raacsan Twitch iyagoo adeegsanaya adeeggayaga, laakiin natiijooyinka ugu wax ku oolka badan, waxaan kugula talineynaa inaad sameyso waxyaabo kale si aad u kobciso waxyaabaha soo socda. Fadlan aqri si aad wax uga barato siyaabo badan oo aad ugu kobciso kuwa raacsan Twitch bilaash ah.
2. La soco kanaalka Twitch ee ay wadaan wabiyada kale
Ahaanshaha barxad bulsheed, Twitch ayaa kaa caawin kara oo keliya haddii aad xiriir ku sameyso. Waxaad ku samayn kartaa dhowr siyaabood. La hadal wabiyaal kale oo fiiri nuxurka socodka. La falgalaan iyaga qolalka lagu sheekaysto oo ka jawaab celina fariimaha labada wabiyaal iyo taageerayaashaba. Muuji xiisaha aad u leedahay inaad waxbadan ka ogaato waxyaabaha dadka kale ka kooban tahay kuna bogaadi aqoontooda ama haddii aad ka hesho waxyaabaha ay ka kooban yihiin oo xiiso leh.
Marka isticmaaleyaasha kale ay arkaan inaad xiiso iyo saaxiibtinimo leedahay, waxay rabi doonaan inay dib kuu raacaan. Haddii qulquliye caan ah uu go'aansado inuu ku raaco, fursadaha ayaa ah in taageerayaashoodu ay sidoo kale bilaabi doonaan inay ku raacaan.
Horumarinta cilaaqaadka lala yeesho wabiyada kale waa faa iido maadaama aad isweydiisan kartaan midba midka kale inuu marti galiyo ama xitaa kobciyo kanaalkiina. Iskaashi ayaa ka dhalan kara soo-gaadhis wanaagsan oo astaantaada ah waxayna si weyn u dhisi kartaa aqoonsigaaga astaanta ah. Markaad dhisaysid iskaashi noocaas ah, hubi inaad si dhab ah u danaynayso inaad saaxiibtinnimo la yeelato isticmaaleyaasha kale. Tani waxay kaa caawin kartaa inaad ka hortagto inaad yeelato sumcad qof kaliya oo kuwa kale weydiista is-dhiirrigelin.
3. Kaqeybgal dhacdooyinka onlaynka ah iyo kulmada
Ogaanshaha isticmaaleyaasha kale iyo kuwa raacsan shaqsiyan waxay kaa caawineysaa inaad soo uruuriso aqoon dheeri ah oo ku saabsan danaha dadka iyo sidoo kale sida ay u arkaan una adeegsadaan Twitch. Isku day inaad ku xirnaato dadka ka baxsan Twitch. Ka qaybgal kulannada khadka tooska ah, shirarka, iyo kulammada bulsheed ee la midka ah ee aad ku baranayso dadka kale xoogaa.
Waxaad sidoo kale dooran kartaa inaad tagto munaasabadaha qulqulka ama shirarka ciyaarta fiidiyaha ee sanad walba lagu qabto magaalooyinka waaweyn ee adduunka. Waxay ka mid tahay siyaabaha ugu wanaagsan ee lagu koriyo kuwa raacsan barta 'Twitch' ee bilaashka ah, sameynta saaxiibo cusub, iyo barashada waxa dadka kale sameynayaan. Supanova, MineCon, iyo Twitch Con waa qaar ka mid ah dhacdooyinka caanka ah ee 'Twitch' ee aad ka soo qayb geli karto. Waxaad sidoo kale ka raadin kartaa Facebook iyo Twitter kulannada yar yar ee Twitch ee ka dhici kara magaaladaada ama khadka tooska ah.
Habka ugu wanaagsan ee xiriir loogu sameeyo munaasabadaha waa inaad siisaa kaarkaaga ganacsiga kaqeybgalayaasha. Hubso inaad ku darto magacaaga isticmaale ee 'Twitch' iyo sidoo kale xiriiriyeyaasha koontooyinkaaga kale ee warbaahinta bulshada. Waa waxtar in la helo macluumaadkan adiga kugu saabsan oo si fudud loo heli karo maxaa yeelay kuwa kale ayaa si dhaqso leh kula xiriiri kara qalabkooda isla markay helaan macluumaadka.
4. Isticmaal bogagga kale ee warbaahinta bulshada
Qaar badan oo ka mid ah isticmaaleyaasha 'Twitch' ma yaqaanaan muhiimadda ay u leeyihiin isticmaalka marinada kale ee warbaahinta bulshada si ay u xoojiyaan soo-gaadhista astaantooda. Tani waa halka ugu sareysa isticmaaleyaasha Twitch ay ka faa'iideystaan ​​shabakaddooda. Goobaha sida Instagram, Twitter, iyo Snapchat waxay ka caawiyaan hogaaminta isticmaaleyaasha Twitch inay cusbooneysiiyaan kuwa raacsan oo ay si joogto ah ula xiriiraan.
Waa inaad sida ugu badan u adeegsataa kanaallada warbaahinta bulshada maxaa yeelay taasi waxay kaa caawin kartaa inaad naftaada iyo astaamahaaga u soo bandhigto kuwa raacsan ee ku nool meelo kala duwan oo adduunka ah. Adduunyada maanta aadka u caalamiyeysan, baraha bulshada ayaa gacan ka geysan kara isku soo dhawaanshaha farqiga jirka iyo in dhagaystayaasha ay ku farxaan waxyaabaha la midka ah iyo waxqabadyada.
Kaliya ha u isticmaalin koontooyinkaaga warbaahinta bulshada inaad ku dhejiso cusbooneysiin ku saabsan noloshaada. U adeegso inaad u sheegto kuwa raacsan waxyaabaha ku saabsan waxyaabaha cusub. Waxaad sidoo kale u adeegsan kartaa kanaalkaaga si aad wada hadalo ula yeesho kuwa raacsan qaab cod bixin ah ama Q & A oo la falgal ah halkaas oo aad ka raadin karto jawaab celin ku saabsan waxyaabaha aad ka kooban tahay ama aad si fudud ula dhaqanto iyaga. Tani waxay gacan ka geysan doontaa dhisida sawir wanaagsan oo astaantaada ah oo kuwa raacsan ay rajeynayaan inay la falgalaan.
Maskaxda ku hay in dhajinta tweets otomaatig ah oo ku saabsan mawduucaaga 'Twitch' laga yaabo inaysan noqon mid soo jiidasho leh. Taabadalkeed, waad dooran kartaa inaad la wadaagto danahaaga, mashaariicda aad ka shaqeyneyso, waxyaabaha adiga xiisaha kuu ah, ama xitaa cusbooneysiinta waxa socodkaagu noqon doono. Tani waxay kaa caawin doontaa inaad kanaalkaaga ka dhigto mid shaqsiyeed.
5. U diyaari jadwal socodka socodka
Ma dooneysaa inaad ku dhisto daacado daacad ah barta 'Twitch'? Ku dhaji jadwalka qulqulka joogtada ah ee joogtada ah. U cusbooneysii dhagaystayaashaada wakhti kahoreyn goorta ay habboon tahay inay daawadaan nuxurkaaga. Samee jadwal oo la wadaag dhagaystayaashaada. Tani waa hab cajiib ah oo kalsooni looga abuuro dadka isla markaana kor loogu qaado daawashada maalinlaha ah.
Qaadashada jadwalka socodka socodka kaliya kuma kasban doonto kalsoonida dadka. Waxay kaa caawin doontaa inaad ku dhisto xirfadle si dhab ah u qaata howshooda socodka isla markaana ujeedka laga leeyahay la wadaago waxyaabaha wanaagsan. Haddii aadan ku darin oo aad ku dheggan tahay jadwalka maalinlaha ah, markaa daawadayaasha jecel waxyaabahaaga oo doonaya inay wax badan arkaan ma lahaan doonaan wax badan oo ay arkaan. Sidaa awgeed, waxay u gudbi doonaan qof kale 'Twitch channel' ama xitaa bogagga kale ee shabakadaha.
Mar alla markii aad bilowdo inaad soo jiidato kuwa raacsan, waa muhiimad weyn inaad kaheysid iyaga haddii aad runti xiiseyneyso inaad dhisato xirfad shaqo ahaan. Qaar badan oo ka mid ah qulquliyeyaasha ayaa khalad sameeya iyaga oo aan horumarin qorshe wadaag ah waxyaabaha si joogto ah. Ka shaqeynta jadwalka ayaa kaa caawin doonta inaad ahaato mid abaabulan kana soocma kanaalkaaga kuwa kale ee aan isku midka aheyn.
La wadaag jadwalkaaga mawduucyada daawadayaashaada si aad ugu sheegto goorta ay filan karaan inay kugu helaan barta 'Twitch'. Ku dar waxa aad ciyaari doonto iyo waqtiga. Haddii, sababo jira awgood, ay jiraan isbeddelo jadwalkaaga ah, xusuusnow inaad adeegsato kanaalladaada warbaahinta bulshada ama quudinta kanaalka Twitch si aad ula xiriirto dhagaystayaashaada wixii ku saabsan isbeddelka. Tani waxay u oggolaaneysaa daawadayaasha xiisaha leh inay sugaan waxyaabahaaga markay soo baxayaan waxayna sidoo kale siinaysaa sabab ay ugu soo noqdaan kanaalkaaga mustaqbalka.
Waxyaabaha kale ayaa ah inaad hubiso inaad sii dejiso waxyaabaha badanaa. Si joogto ah u qulqulka iyo muddooyinka dheerba waxay kordhineysaa fursadahaaga in dadku ogaadaan. Adoo siinaya dhagaystayaashaada waxyaabo badan, waxaad siineysaa iyaga qiimo u leh ilaha dhaqaalahooda, taas oo si togan u saameyn doonta daacadnimadooda iyo maalgashiga shaqsiyeed ee kanaalkaaga.
Si aad wax badan uga ogaato sida aad u heli karto kuwa raacsan Twitch bilaash ah, halkan farriin noogu soo dir, annaguna waxaan ku farxi doonnaa inaan kaala hadalno fursadaha kala duwan!
Maxaan ugu baahanahay kuwa raacsan Twitch bilaash ah?
Dhamaanteen waan ognahay in helitaanka taageerayaal badan oo 'Twitch' ah ay faa iidooyin badan u leedahay koontadaada 'Twitch'. Markaad leedahay taageerayaal badan, waxaad u muuqataa inaad heshid waxyaabo badan oo jecel, faallooyin badan, iyo aragtiyo badan.
Tani runti waxay caawineysaa kuwa isku dayaya inay nolol ku noolaadaan ama ku kasbadaan isticmaalka Twitch. Kadib sanado badan oo aan hogaamiyeyaal ka aheyn warshadaha "Free Twitch Followers", waxaan soo saarnay 100% Nidaam Bilaash ah oo loogu talagalay dadka isticmaala si ay u helaan dad badan oo raacsan Twitch maalin kasta. Waxay yihiin kuwo tayo sare leh oo lagu bartilmaameedsado danahaaga.
Kuwaani ma yihiin kuwa raacsan Twitch?
Waxaan runti siinnaa taageerayaal dhab ah macaamiisheenna lacagta qaata, si ka duwan 98% bogagga internetka ee halkaas ku yaal. Inta badan degellada kale waxay sheegtaan inay bixiyaan adeeggan bilaashka ah, laakiin ma sheegaan! Waxaan awoodnaa inaan bixinno adeeggan bilaashka ah maxaa yeelay taageere kasta oo lagu kasbado adeegsiga adeegeena raacsan '4 waa isticmaale kale sida adiga oo kale.
Adeeggeennu waa bulsho u oggolaanaysa dadka caqliga la midka ah inay is helaan oo ay isku xirmaan. Annagu waxaan nahay dhexdhexaadiye. Ha ku kadsoomin shabakadaha sheeganaya inaad siiso kuwa raacsan oo dhab ah. Had iyo jeer waxaa la yiri haddii ay u muuqato mid aad ufiican in run la ahaado, waxay u badan tahay inay tahay to iyo in gebi ahaanba laga dhigo mid hufan, waa inaan ogaano in tayada kuwa raacsan ay kala duwanaan doonto. Tani waa sababta oo ah dadka qaar ayaa si fudud dadaal badan ugu sameeya koontadooda kuwa kale. Tani waa isku mid in laga sheego Twitch guud ahaan.
Marka, ha ka nixin haddii hal daqiiqo sumad runti aad u qabow ay ku raacdo adiga iyo daqiiqada xigta qof caadi ah oo dhowr sawir leh. Iyadoo aan loo eegin noocyada taageerayaasha ah ee dhammaantood laguu soo dirayo, waxaa lagu xushay danahaaga la midka ah ee aad dooratay markii aad iska diiwaangelisay adeeggayaga.
Sideen ku ilaaliyaa Tageerahayga 'Twitch Followers'?
Waxaa muhiim ah in la ogaado in shaqadeennu tahay inaan dad cusub u gaarsiino boggaaga Twitch ee Bilaashka ah.
Waa shaqadaada inaad halkaa ku hayso. Daraasaduhu waxay muujinayaan in haddii boggaagu uusan lahayn waxyaabo badan ama uusan si joogto ah u bixinaynin waxyaabo cusub oo soo jiidasho leh tiradaadu way dhici doontaa.
Waxaan ku dadaalaynaa sida ugu fiican ee aan u siinno dad ay isku dan yihiin. Tani waxay ka dhigan tahay inaad u maleyneyso boggaaga inuu bixinayo waxyaabo ku saabsan danaha aad dooratay ka hor intaadan bilaabin qorshe bilaash ah ama lacag bixin ah waxaad u badan tahay inaad ilaaliso oo aad kobciso boggaaga.
Khubarada waxay soo jeedinayaan in dhajinta waxyaabaha tayada leh 1-3 jeer maalintii ay umuuqato inay soo jiidaneyso natiijooyinka ugu fiican. Waa muhiim inaad waqtigaaga ku qaadatid qoraaladaada. Hubso in sawirrada / fiidiyowyadu ay yihiin kuwo tayo sare leh oo ay la xiriiraan dulucda bartaada 'Instagram'. Ugu dambeyntiina, hubi inaad la macaamisho dhagaystayaashaada. Haddii ay wax ka sheegaan qoraaladaada hubi inaad uga jawaabto iyaga. Sidoo kale tixgelin inaad booqato boggooda oo aad siiso wax la mid ah ama laba ah. Way socon doontaa markii ay timaado abuurista xiriiro muddo dheer ah oo ku saabsan boggaaga.
Gears Waxaad U Baahan Tahay Inaad Ku Bilowdo Kanaalka Socodka Twitch
Hal abuurayaal badan oo ka kooban, gaar ahaan ciyaartooyda, ayaa u soo jeestay muuqaalka fiidyaha tooska ah ee loo yaqaan Twitch, iyo sababo wanaagsan dartood. Abuurayaasha qiimeeya la falgalka taageerayaashooda...
15th Juun 2022
Sidee buu Twitch ula dagaallamaa Nacaybka?
Caannimada cirka isku shareertay ee Twitch ayaa sidoo kale la keentay war xun oo loogu talagalay streamers. Bilihii la soo dhaafay, qaar badan oo ka mid ah Twitch streamers ayaa soo sheegay weeraro nacayb ah, tusaale ahaan, isticmaalayaasha isticmaalaya weerarka Twitch
7th Juun 2022
Doorka Twitch ee Beddelka Adduunka Abuuridda Mawduuca Fiidiyowga
Labaatankii sano ee la soo dhaafay, caannimada abuurista muuqaallada ayaa cirka isku shareertay. Labada abuurayaasha madax-bannaan iyo summadaha waxay u jeesteen nuxurka muuqaalka waxayna dhadhamiyeen guul,...
Ma waxaad dooneysaa bilaash, tayo sare leh oo bartilmaameed ah kuwa raacsan Twitch maalin kasta?
Ku soo biir kumanaan dad ah oo horeyba u isticmaalayay Streamular maalin kasta si aad u hesho taageerayaal Twitch bilaash ah oo aad u jeceshahay kanaalladooda!